Ezona zixhobo zilishumi zivulekileyo zokuvula ze-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ezona zixhobo zingcono ezingama-10 zokuvula i-Android
Siphila kwixesha apho ubumfihlo buyeyona nto iphambili kwizigidi zabantu, abantu abaqale ukukhathazeka malunga nokuba yeyiphi idatha eqokelelweyo kunye nolunye unyango abalufumanayo, Ukuthengisa kubantu besithathu uninzi lwendawo ekuyiwa kuyo.
Ngaphandle kokuba ingcali yezokhuseleko ihlalutya ngokukuko ukusebenza kwesicelo, akunakwenzeka ukuba sazi ukuba isicelo siyakwenza oko sikuthethayo kwaye sigcina kuphela idatha ebesiyigunyazisile ngaphambili. Olona hlobo kuphela lokwazi ngokuqinisekileyo ukuba kunjalo, yile ukuba isicelo singumthombo ovulekileyo.
Olona loncedo luphambili kwaye kwangaxeshanye eyona nto inomtsalane kwezicelo zomthombo ovulekileyo kukuba ikhowudi yabo iyafikeleleka kuye wonke umntu, ke akanasidingo nangaliphi na ixesha ukuxoka malunga neyiphi idatha eqokelela ngalo lonke ixesha okanye ngokufihla amanqaku afihliweyo anokugqithisa kuthintelo lwenkqubo yokusebenza.
Uninzi, ukuba ayingabo bonke, amaxesha, usetyenziso lomthombo ovulekileyo lusimahla kwaye zigcinwa ngokusekelwe kwiminikelo Abasebenzisi abasebenzisa usetyenziso lwabo, yiyo loo nto, xa kunokwenzeka, ukuba usebenzisa isicelo solu hlobo, jonga ukubanakho ukusebenzisana ngokwezezimali.
4 Vula ikhamera
9 DuckDuckGo isiKhangeli saBucala
10 Imeyile ye-K-9
12 Yenza umphathi weFayile
14 Umthetho 2
15 Umhlalutyi weWi-Fi
I-VLC sesinye sezona zicelo zaziwayo kwihlabathi lokuba ngumthombo ovulekileyo, isicelo esigcinwe kule minyaka ingama-20 idlulileyo kuphela ngeminikelo. IVLC yiyo oyena mdlali ufumanekayo namhlanje nakweliphi na iqonga, kuba iyahambelana nazo zonke iikhowudi ezintsha kunye nokuba, kwintengiso, zombini iaudiyo kunye nevidiyo.
Kwakhona, iyafumaneka kuwo onke amaqonga nayo simahla. Ukuphela kwento kodwa kwesi sicelo kukuba uyilo lwayo lunokuhlaziywa ukuze luguqulwe kwi-Android kwaye lubonelele ngokusebenza okongeziweyo kweemovie okanye uthotho esivelisayo ... Kodwa ke, sisicelo somthombo ovulekileyo esenza ngokwaneleyo ukuze sikhululeke.
Enye yevidiyo emnandi kunye nabadlali beaudiyo abafumaneka kwifomula yomthombo ovulekileyo inokufumaneka kwiRhafu, iqonga elinokuthi nikuvumela ukuba uguqule ilayibrari yamabhayisikobho kwiNetflix kwaye loo nto incinci okanye akukho nto kufuneka iwamonele la maqonga (ngaphandle kwekhathalogu).
Ukuba ufuna ukwenza ifayile ye- iziko lemultimedia Ukudlala imifanekiso yakho okanye iividiyo naphi na, unganika iRhafu ithuba, isicelo esine khowudi ekhoyo GitHub.
Umthuthukisi: Isiseko seRhafu
Kwaye siyaqhubeka nokuthetha ngezicelo zemultimedia ngeNewPipe, enye yezona ndlela zibalaseleyo kwimarike yezicelo ze-Android ezikhoyo ngoku. INewPipe isivumela ukuba sonwabe kuwo wonke umxholo weYouTube kodwa ngemisebenzi eyongezelelweyo enabasebenzisi bePremiyamu yeYouTube kuphela, njenge dUkulayishwa kwevidiyo kunye nokudlala kwakhona yimvelaphi.
Ngokucacileyo, ukhuphiswano ngqo lwesicelo seYouTube, iNewPipe ayifumaneki kwiVenkile yokudlala, kodwa sinako khuphela ngokuthe ngqo kwiphepha labo leGitHub, apho sinokufumana khona ikhowudi yesicelo.
Ukuba u khangela Gcwalisa isicelo sakho sokuthatha iifoto okanye iividiyo Izintandokazi ezingumthombo ovulekileyo, isicelo osikhangelayo kwiKhamera evulekileyo, isicelo esisibonelela ngemisebenzi emininzi kunye nazo zonke iintlobo, ukuba ibize ingalo nomlenze. Kodwa hayi, usetyenziso lusimahla kwaye ikhowudi yalo iyafumaneka SourceForge.
Umthuthukisi: UMark Harman
Isicelo seMpawu siye saba yindlela efanelekileyo kubo bonke abasebenzisi abachaphazelekayo ngokwenene malunga nemiyalezo eqhubekayo ye-WhatsApp malunga nantoni iceba ukwenza ngedatha yethu.
Isisombululo sifumaneka kuMqondiso, Olunye usetyenziso olukhuselekileyo lokuthumela imiyalezo Kwaye ikwangumthombo ovulekileyo, ke sisiqinisekiso esongezelelweyo kuba iyangqina ukuba ayiqokeleli kwaphela idatha kwiincoko zethu.
Njenga Kodi, ikhowudi yesi sicelo sokuthumela imiyalezo iyafumaneka kwi GitHub. Esi sicelo, njenge-VLC sigcinwa kuphela kwisiseko se iminikelo evela kubantu ngabanye, ungaze uvela kwiinkampani okanye kwiimali ezinkulu ekufuneka uzenzile kufuneke u into kwixa elizayo.
Uphawu - Imiyalezo yabucala
Umthuthukisi: Isiseko seSiginali
Enye insiza yemiyalezo ithandwa kakhulu kwaye inyanga nenyanga ifumana izigidi zabasebenzisi iTelegram, isicelo esenza ukuba ikhowudi yayo ifumaneke kuye wonke umntu GitHub.
Ngokungafaniyo noMqondiso, iTelegram ixhaswe ngezimali yiminikelo evela kwiinkampani ezinkuluNangona kunjalo, kule minyaka idlulileyo kunciphise ukuxhomekeka kwayo ekwaziseni izibhengezo kumaqonga amajelo, amajelo asetyenziswa ngakumbi nangakumbi linani elikhulu leenkampani.
Umthuthukisi: Umnxeba we-FZ-LLC
Isiseko seMozilla sisemva kweFirefox, esinye sezona zikhangeli zigxile kubucala esinokuzifumana kwimarike yanamhlanje. Nangona impumelelo ye-Chrome iye yawa phantsi kwaye inani labasebenzisi liye lancitshiswa kakhulu, kusenjalo nanamhlanje isikhangeli esihle kakhulu ekufuneka usithathele ingqalelo. Ikhowudi yeFirefox iyafumaneka kwiwebhusayithi yeMozilla kwaye GitHub.
IFirefox: isikhangeli sewebhu esikhawulezayo, sabucala nesikhuselekileyo
Enye into ebalaseleyo efumanekayo kwimakethi yomthombo ovulekileyo kwaye iyahambelana ne-Android ifumaneka kwiBrave, isikhangeli esingagxili kuphela kubumfihlo babasebenzisi, kodwa, ibandakanya isibhlisi sentengiso esinamandla.
Ikhowudi yesicelo iyafumaneka nge GitHub dibanisa, iyafumaneka kuzo zombini i-iOS, Windows, Linux kunye neMac. Ngombulelo kulungelelwaniso lweebhukumaka, singayisebenzisa njengesikhangeli sethu esiphambili kuzo zonke izixhobo ukuba sifuna ukusebenzisa ithuba labucala kunye nentengiso ibhloko edibeneyo.
Isikhangeli seWebhu saBucala esiBucala
Umthuthukisi: Isoftware yesibindi
DuckDuckGo isiKhangeli saBucala
I-DuckDuckGo ayisiyiyo injini yokukhangela kuphela ayirekhodisi umsebenzi wethu, kodwa ukongeza, ikwasinika nesixhobo esivulekileyo somthombo ophakamisa iflegi yabucala ngawo onke amaxesha.
Njengoko sikhangela kwaye sihamba, iDuckDuckGo iyasibonisa uvavanyo lweDigri yaBucala xa undwendwela iwebhusayithi, uvavanyo oluvumela ukuba sazi inqanaba lokhuselo ngokukhangela nje. Ikhowudi yesi sicelo iyafumaneka GitHub.
I-K-9 Imeyili ngumthombo we-imeyile ovulekileyo kunye nenkxaso yeakhawunti ezininzi, ukukhangela, i-IMAP yokutyhala i-imeyile, ukuvumelanisa okuninzi kwifolda, umaki, ugcino, utyikityo, i-BCC-self, i-PGP / MIME ... iphuhliswe luluntu lomsebenzisi. Ikhowudi yakho iyafumaneka nge GitHub.
Umthuthukisi: K-9 Inja Abahamba ngeenja
Izinto njengoko zinjalo, ukuya kuhambo kwaye ungasebenzisi iimephu zikaGoogle kunokuba yinto ephambeneyo ukuba uninzi lwabasebenzisi abazimisele ukuqhuba. A Isisombululo somthombo ovulekileyo Sifumene kwi-OsmAnd, usetyenziso lomthombo ovulekileyo olusebenzisa iimephu ze-OpenStreetMaps, iqonga lomthombo ovulekileyo.
Isicelo ivumela ukuba sikhuphele iimephu kunye neendlela zokusebenza ngaphandle konxibelelwano lwe-intanethi, ukukhangela iindlela zothutho zikawonkewonke, umda wesantya sendlela, ukwenza iindlela ezizezakho, ukukhangela iindawo zokuphumla ... Ikhowudi yesicelo iyafumaneka GitHub.
I-OsmAnd -iMephu ezingekho kwi-Intanethi kunye nokuKhangela
Yenza umphathi weFayile
Abaphathi befayile kwi-Android bazula ngokukhululekileyo kwiVenkile yokudlala. Uninzi lwazo lunezithuba zedatha kwaye ngokunyanisekileyo asinakuthembela uninzi lwazo. Uninzi lwazo kodwa ayizizo zonke, kuba isisombululo soku Umba wokucaca kubaphathi beefayile Siyifumana kuMlawuli weFayile yeAmaze, usetyenziso olunenani elikhulu lemisebenzi yokwenziwa kunye nemisebenzi enekhowudi yayo efumanekayo GitHub.
Umthuthukisi: Iqela I-Amaze
I-OpenScan isinika usetyenziso lomthombo ovulekileyo olufanelekileyo Skena naluphi na uhlobo loxwebhu, Ngaphandle kokuvumela ukuguqula iziphumo ziye kwifomathi yePDF kwimizuzwana embalwa. Nje ukuba sivavanye uxwebhu, sinokuwucoca umfanekiso kwaye sabelane ngawo kwifomathi yomfanekiso kunye nePDF.
Ukuba ngumthombo ovulekileyo, ayiqokeleli nayiphi na idatha esinokuvelisa sisebenzisa usetyenziso.
I-OpenScan-Inkqubo yokuSkena amaXwebhu simahla
Umthuthukisi: Abaphuhlisi be-Ethereal
Ukuba ufuna ukwenza ngokwezifiso isixhobo sakho ngokungathi siyiPixel kwaye awufuni ukuhlawula i-euro enye kwaye usebenzise nesicelo somthombo ovulekileyo, isisombululo sifumaneka kwi-Launcher Launcher, isiqalisi Unanto encinci yokumonela uNova Launcher Njengazo zonke ezinye izicelo, ikhowudi yayo iyafumaneka GitHub.
Umthuthukisi: UDavid Sn
I-Wifi Analyzer isivumela ukuba sisebenzise ukusebenza kwenethiwekhi yethu ye-WiFi ngokuhlalutya iinethiwekhi ze-WiFi kwindalo esingqongileyo, ukulinganisa amandla esignali kunye nokuchonga amajelo axineneyo. Esi kuphela kwesicelo esivulekileyo somthombo Hlalutya inethiwekhi yethu yeWi-Fi, Into ekufuneka ithathelwe ingqalelo kuba iVenkile yokuDlala igcwele ezi ntlobo zezicelo, usetyenziso olunokuba nekhowudi enobungozi.
Ukuba ngumthombo ovulekileyo, nawuphi na umsebenzisi unokujonga ngokulula ukuba isicelo sisebenza njani kwaye ukuba siqokelela nayiphi na idatha. Yintoni egqithisile, ayifuni uxhumano lwe-intanethi, eqinisekisa ukuba awuqokeleli nayiphi na idatha kwisixhobo sethu. Isicelo siphuhlisiwe kunye namavolontiya kwaye ikhowudi yayo iyafumaneka GitHub.
I-WiFi Analyzer (umthombo ovulekileyo)
Umthuthukisi: Uphuhliso lwesoftware yeVREM
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zixhobo zingcono ezingama-10 zokuvula i-Android
Imidlalo ye-Anime ephezulu ye-Android